China Fekitori Mutengo GGD AC Yakaderera Voltage Distribution Kabineti Mutengesi-shengte vagadziri uye vanotengesa | Shengte
Fekitori Mutengo GGD AC Yakaderera Voltage Distribution Kabineti Mutengesi-shengte
GGD AC yakaderera-voltage yekuparadzira kabati inokodzera 50Z AC, yakatarwa kushanda voltage 380V, yakatarwa kushanda ikozvino 3150A kugovera akateedzana emagetsi magetsi, kuchinjisa, fekitori nemabhizimusi emigodhi, nezvimwewo. magetsi nemidziyo yekuparadzira.
GGD AC yakaderera-magetsi kugovera kabhodhi mhando nyowani yakaderera-magetsi ekuparadzira kabhodhi yakagadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemukuru webazi reMagetsi, huwandu hwakawanda hwevashandisi vemagetsi nedhipatimendi dhizaini, uye zvinoenderana nemitemo yekuchengetedza , hupfumi, kufunga uye kuvimbika. Chigadzirwa chine hunhu hweakakwira chikamu chikamu kugona, kwakanaka kwesimba uye kupisa kwemafuta, inoshanduka magetsi scheme, inokodzera mubatanidzwa, nhevedzano, yakasimba kugona, inova mamiriro uye yakakwira dziviriro giredhi. Inogona kushandiswa sechinhu chinotsiva chigadzirwa chemagetsi mashoma switchgear.
GGD AC yakaderera voltage yekuparadzira kabhodhi inoenderana neIEC 439 "Yakadzika Voltage switchgear uye Kudzora Midziyo Yakazara Seti", GB7251.1 "Yakadzika Voltage switchgear uye Kudzora Midziyo Yakazara Chikamu I: Type Type Bvunzo Yechikamu Type Bvunzo Yekushandisa Yakakwana Set" uye mamwe maitiro.
A. Dare remakurukota eA. Furemu zvikamu uye zvakasarudzika zvinotsigira zvikamu zvinopihwa neyakagadziriswa-poindi yekugadzira chirimwa chechikamu chesimbi kuti ive nechokwadi chekurongeka uye mhando yemutumbi wedare. Izvo zvikamu zveyakajairika kabhineti zvakagadzirwa zvinoenderana nesisitimu yemodule uye zvine maburi ekugadza e20mm die. Iyo coefficient yepasi rose yakakwira, iyo inogona kuita kuti fekitori ione pre-kugadzirwa, kupfupisa iyo yekugadzira kutenderera uye kugadzirisa basa rekuita.
B. GGD kabhoni dhizaini, ichinyatso kufunga nezve kupisa kupisa kudzikira mukushandiswa kwe cabinet, kune huwandu hwakasiyana hwekupisa singi maburi kumagumo ese eabineti. Kana izvo zvemagetsi zviri mukabati zvadziyirwa, kupisa kunokwira uye kubuda mukati mepamakomba ekumusoro, nepo mweya unotonhora uchiramba uchiwedzera maburi ezasi ari mukabhodhi kuti kabati rakavharwa rive nzira yemhepo yekufefetera kubva pasi kusvika kumusoro, saka sekuzadzisa chinangwa chekupisa kupisa.
C. GGD kabhodhi zvinoenderana nezvinodiwa nemodem maindasitiri chigadzirwa dhizaini, iyo yegoridhe chikamu reshiyo nzira inoshandiswa kugadzira chimiro chekabineti uye saizi yekuparadzanisa chikamu chimwe nechimwe, kuitira kuti kabati iri yakanaka uye inoyevedza, iine chitarisiko chitsva.
Dhoo rekhabhineti rakabatana nefuremu nekutenderera inofamba hinge, iri nyore kuisa nekukatanura. Kune gomo rerabha tambo yakasungirirwa mudanga remusuwo. Iyo tambo pakati pemusuwo uye furemu ine imwe yekumanikidza sitiroko kana ichivhara, iyo inogona kudzivirira musuwo kuti ubonderane zvakananga ne cabinet, uye zvakare kugadzirisa nhanho yekudzivirira yemusuwo.
E. Instrument madhoo akashongedzerwa nemagetsi zvikamu zvakabatanidzwa kune furemu ine yakawanda yakapfava waya waya. Fittings iri kabhineti zvakabatana pamwe furemu pamwe knurling sikuruu, uye yose cabinet anoita zvakakwana grounding dziviriro redunhu.
F. Iyo jasi rekabhodhi rakagadzirwa nepolyester -yakaita-yakaita kubheka pendi kana epoxy upfu. Iyo ine yakasimba kunamatira, kunaka kwemavara uye matte toni. Iyo inodzivirira inopenya mhedzisiro uye inogadzira yakasununguka yekuona nharaunda yevashandi vebasa.
Chifukidziro chepamusoro chemuviri wekabhineti chinogona kubviswa pazvinenge zvichikosha kuti gungano rigadziriswe uye kugadziridzwa kwebara rakakura panzvimbo. Makona mana ehabhineti akashongedzerwa nezvindori zvekusimudza uye zvekufambisa.
Chikamu chekudzivirira chekabineti IP30. Vashandisi vanogona kusarudza pakati peIP20 ne IP40 zvinoenderana nezvinodiwa nharaunda yekushandisa.
Muenzaniso Rated voltage (V) Rated iyezvino (A) Rated pfupi redunhu kutyora ikozvino (kA) Yakatemerwa pfupi-pfupi kumira magetsi (IS) (kA) Rated yepamusoro kubvumidza yazvino (kA)
Pashure: Yakasarudzika GCK (L) Yakadzika Voltage Dhirowa switchgear Fekitori Mutengo-shengte
Zvadaro: Yakanyanya Mutengo Yakaderera Voltage switchgear GCS Yakadzika Voltage Drainage switchgear Mutengesi-shengte MOQ 1pcs